Dhagayso Madaxwayne Xassan: Fursad weeye gabdhaha shaqaalaha ah ee Sucuudiga loo dirayo – Radio Daljir
Abriil 22, 2016 12:14 g 0
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud ayaa mar kale ku adkeysey sida uu u taageersan yahay in Sucuudiga loo diro Gabdho Soomaaliyeed oo gaaraya kun gabdhood sanadkasta kuwaas oo shaqada ay qabanayaan ay tahay adeegto.
Madaxweynaha ayaa sheegay in gabdhaha keliya aanu heshiisku ahayn ee ragguna ay ku jiraan, inkasta oo horey warka soo baxay uu ahaa gabdho adeegtooyin ah, madaxweynuhuna ma sheegin raggu shaqada ay qabanayaan.
Xasan Shiikh Maxamuud ayaa sheegay in gabadhaha Soomaaliyeed u tahriibaan Sucuudiga dhibaato badana hadda ay u amraan, qaarkood xabsiyo ku jiraan maxaa diidaya haddii la sharciyeeyo, Dowladdu ilaaliso xuquuqdooda, meel ay u dacwoodaana loo sameeyo ayuu is weydiiyey Madaxweyne Xasan, mar uu waraysi siinaayey laanta afsoomaaliga ee Codka Maraykanka VOA.
Madaxweyne Xasan Shiikh ayaa sheegay in waxa dhalinyarada dalka ka eryaaya ay tahay shaqa la’aan, maxaa loo diidayaa in dowladdu shaqo u raadiso kana warqabato.
Warar ayaa sheegaya in nidaamka gabdhaha Soomaaliyeed loo shaqaaleysiinayo uu yahay nidaam Agency ah kaas oo hoostagaya Safaaradda Soomaaliya, isla markaana dhaqaale badan ka helaya Boqortooyada Sucuudiga, waxaana uu u dhexeyanayaa gabdhaha shaqaalaha ah iyo Agnecy kale oo Sucuudiyaan ah.
Safarkii uu Madaxweynaha Soomaaliya Xassan Shiikh Maxamuud ku tagay dalka Sucuudiga dhamaadkii sanadkii hore 2015 ayaa la sheegay inay qeyb ka ahayd saxiixida heshiis dhexmara dowlada Federaalka Soomaaliya iyo Sucuudiga oo ku aadan haween Soomaalida ah ee shaqaalo ahaan loo geenayo dalka Sucuudiga, mashruucaasi oo ay si weyn uga shaqeenaysay Safaarada Soomaalida ee dalka Sucuudiga iyo Safiirka cusub ee wadankaasi loo magacaabay.
Dalal badan oo horey gabdho shaqaale ah ugu diri jiriy dalka Sucuudiga ayaa joojiyey waxaana ka mid ah dalalka Itoobiya, Uganda iyo kuwo ku yaala Aasiya, kadib markii si weyn loogu xad-gudbey xuquuqdooda isla markaana waxba laga qaban waayey dacwooyinkooda.
Waxaa si u weyn u canbaareeyey qorshaha Dowladda hay’ado badan oo u dhaq-dhaqaaqa arrimaha haweenka waxaana ay ka dayriyeen hab dhaqanka muwaadiniinta Sucuudiga ee loo shaqeynaayo, taariikhda la hayo iyo sida indho la’aanta ah ee Dowladdu ay sanadkasta dooneyso in ay kumaankun gabdhood u dhoofiso. Hay’adaha xuuuqda ayaa sheegaya in Dowladdu ku fashilantey in ay dhalinyarada shaqo uga abuurto dalkooda, isla markaana ku faanto isla dalkii ay u tahriibayeen ay tiraahdo shaqo ayaan uga helnay.
Hoos ka dhegayso Waraysi uu Madaxweynuhu siiyey VOA
Dhagayso Maanhadal oo looga hadlay maantay abaaraha Soomaaliya, gaar ahaan deegaannada Puntland